Ugqumugqumu wathola udumo olukhulu phakathi izakhamizi ehlobo futhi balimi. Lokhu akusona isimanga, ngoba lokhu kuyinto sitshalo esimangalisayo. Linesizotha, kakhulu ezithela, eyodwa kuphela ehlathini omdala uzokunika 20 kg amajikijolo fresh. Kulokhu, sezihlahla musa hlala isikhala esiningi futhi zingakhula ngisho ekhoneni shady yensimu lapho lowo mhlaba laliyodluliselwa nalutho. Futhi indlela okumnandi kuyinto gooseberries ezivuthiwe. Caloric ngokwanele ongaphakeme, kuphela 44 kcal 100 g ngomkhiqizo ngamunye. Ungawudla cishe akukho senzo futhi akusho ukulimaza umzimba wakho.
Umlando kanye nezinhlobonhlobo ethandwa kakhulu
Esikhathini XI izindela ekhulwini eNgilandi liye landa gooseberries. Calorie avunyelwe ukuyisebenzisa ngisho zokuzila ukudla okunzima kakhulu lokhu iminyaka, ngaphezu kwalokho, yayisetshenziswa njengomuzi mbo obalulekile amavithamini. Kodwa ukufohla yangempela kulinywe yayo kwenzeka ekhulwini XIX, nini esikhundleni kunezinhlobo zasendle amasha, enika Bole izithelo ezinkulu futhi amnandi. Kancane kancane, isiko ifinyelele futhi eRussia, okuyinto ithandiwe futhi uyaqhubeka ukuba akhule inqwaba kuze kube manje. Namuhla, ngokuvamile ngo izivande namahlathi ungathola izinhlobo ezifana Emerald kanye Guqula, Honey, isiRashiya, eMoscow, Spring, Rose ekuseni, Chernomor, isikhumbuzo nabanye.
Hhayi kuphela inkimbinkimbi amasu akhe ukulima, kodwa futhi ukunambitheka okukhulu sithokozela gooseberries. Calorie izithelo zawo uphansi, okungukuthi, kuba inqolobane oyigugu amavithamini kanye umthombo ezincane carbohydrate, okungadingi ubuhlungu emini. By the way, ewusizo kakhulu iyona ugqumugqumu umbala omnyama, ngakho kukhona isidingo amajikijolo avuthwa kahle. Izithelo anamavithamini uC, A no P, ngaphandle inombolo enkulu B amavithamini B. Kuyinto bawumthombo omkhulu iodine ne-potassium, i-sodium ne-calcium, manganese, insimbi, zinc, cobalt, ithusi ne phosphorus ekhona amajikijolo tannic futhi pectin. Libuye libe umthombo owusizo citric futhi acid malic, flavonoid, futhi le-serotonin. Okunjalo abavamile engadini ugqumugqumu. Calorie, njengoba siphawulile, mncane impela, kuphela 44 kcal 100 g umkhiqizo.
Gooseberries - ke ikhambi kwesokudla yezinkinga eziningi zempilo. Noma yimuphi berry unothile ngamavithamini kanye okuhle empilweni yakho, kodwa noma kunjalo namuhla, sithola ukunakwa kwakho phezu ehlathini olunameva. Kunconywa ukuba unake okukhethekile le gooseberries abomvu. Calorie akusiyo nhlobo okungenhla, kodwa uqukethe amavithamini kakhulu kunamanye izinhlobo. Ake sihlolisise lokho izifo kunconywa ukuyisebenzisa.
Izinkinga kanye nezixazululo
La majikijolo okumnandi zinhle kakhulu ukuqinisa imithambo yegazi. Ngenxa ukusetshenziswa kwabo njalo izitimela inkumbulo, ukuthi kuyindlela elula futhi ezingabizi ezinjalo bazindele ukuthuthukiswa yi-multiple sclerosis. Iphuzu olandelayo kubalulekile ikakhulukazi labo abahlala ezindaweni amakhulu kanye nezindawo zemvelo ababencishwe amathuba ngaphambilini. Amajikijolo ukukhuthaza excretion eziyingozi esindayo zensimbi. Ngokwezinga elikhulu lokhu impahla babe besizulu amnyama. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi gooseberries ewusizo futhi oluhlaza. Caloric kancane yayo ephansi ngoba iqukethe ushukela kancane, cishe 35 kcal 100 g ngalinye
Kodwa akugcini lapho, amajikijolo ezivuthiwe abe impahla kakhulu uyephuza ukukhula izimila ahlukahlukene. Noma yimuphi izithelo ukuthi briar uvumele ukwehlisa high blood pressure. Ngaphezu kwalokho, ungathola imininingwane mayelana nokunciphisa amazinga cholesterol egazini, nakuba umuthi olusemthethweni uthi usizo olungcono kunalo lonke le njongo rose okhalweni tincture.
Ngoba wena, besifazane ayebathanda
Ngokuvamile, ukudla okunama-kilojoule amancane, futhi kule ndaba, amajikijolo, Okuthakazelisayo izintokazi amahle. Mhlawumbe, kodwa baningi kangaka kangaka uyakuthanda gooseberries. Calorie okuqukethwe 100 grams ngasinye ifaniswe caramel, futhi ngaleyo ndlela izinzuzo uhlasela ezinkulu. Kodwa ake sibuyele emuva izinzuzo zezempilo. La majikijolo emangalisayo njengesithiyo isisu laxative futhi choleretic, okungukuthi, labo ababukele isisindo sabo noma banezinkinga nalezi emizimbeni, ukuthatha imibukiso kwasekuqaleni. Abaningi ezingaphezu kuka kungabasiza elula gooseberries engadini. Calorie (abazuzayo kuso okuningi) ungase ungazihluphi, uphansi kakhulu. Amajikijolo ukopha, shesha sokuthola inflammations ahlukahlukene. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuqashelwe ukuthi kujwayeleke umzimba ukuqinisa amasosha omzimba.
Naphezu zonke izinzuzo gooseberries oluhlaza kungenziwa ayifakiwe ekudleni kwakho kwezinye izimo. Lena ngokuyinhloko ngabanye komzimba. Kungcono ukuba uxhumane nodokotela wakho ukuze aninike lona izincomo kunesidingo. Gooseberries ayikwazi ukusetshenziswa ne imikhiqizo njenge-yogurt yogurt. Kodwa ushizi kuyinto umphelelisi ephelele ukuze amajikijolo okumnandi.
Awukwazi indiva iqiniso lokuthi izihlahlana olunameva Sekukaningi baphathwe zinambuzane. Yingakho ingozi okunoshevu amajikijolo kuphezulu kakhulu, uma kungekhona begeza kubo ngaphansi kwamanzi agelezayo. Kumelwe siqaphele ukuba singavumeli ukudla gooseberries inqwaba kulabo bathambekele ukuqunjelwa. Ngaphezu kwalokho, hhayi kuphela amajikijolo, kodwa broths kusuka amaqabunga ayo abe nomphumela isisu futhi lihambisana sohudo okungase kuholele ekubeni uthunyelelwe ukuphelelwa amanzi emzimbeni.
ugqumugqumu kuvuna ebusika
Ngendlela omisiwe lokhu berry kugcinwa kahle, ngakho kaningi emizi ukulungiselela ujamu ugqumugqumu. Calorie okuqukethwe kwalo mkhiqizo impela high, mayelana 200 kcal 100 g ngalinye, ngoba isisekelo ushukela, kunokuba berry. Nokho, kuyinto ujamu Kulonda lemali izakhamzimba. Yiqiniso, kubalulekile ukugcina lesifanele ukupheka ubuchwepheshe. Ukuze wenze lokhu, izithelo zokuqala iphuphuma ushukela bese ushiye amahora ambalwa. Khona-ke, gqoka umlilo, futhi salethwa ngamathumba, bese kuvaliwe futhi bavunyelwe ukuba kuphole. Ngemva Ukupholisa okuphelele kuyadingeka ukufudumeza amajikijolo futhi. Ngemva eyesithathu Ukushisa ujamu ilungele capping. Ungase ugcine inani eliphezulu amavithamini namaminerali futhi Thenga i-jam ebusika, okuyinto dessert esimnandi hhayi kuphela, kodwa futhi umthombo izakhi.
Yini ikhalori ukudla: ithebula ikhalori amasobho, izitsha main, nama-dessert ukudla okusheshayo
Yini imikhiqizo bayakhishwa ukuze ngehlise umzimba?
Indlela okwesabisa iminyovu? Yini nephunga sivimbele iminyovu?